5G, yechishanu chizvarwa nharembozha yekutaurirana tekinoroji chizvarwa chitsva chebandaneti bhendi yekutaurirana tekinoroji ine hunhu hwekumhanya, kunonoka kuderera uye kubatanidza kukuru. Iyo network yezvivakwa kuona iyo murume-muchina uye chinhu kubatana.
Iyo Internet yezvinhu ndiyo inonyanya kubatsira iyo 5G. Simba rekutyaira re5G harisi iro chete kukura kuri kudiwa kwevatengi kweanokurumidza manetwork, asiwo kuwanda kwema network network zvigadzirwa munzvimbo yeindasitiri. Aya maindasitiri anowedzera kuvimba nemasaiti enetiweki kuti aunganidze uye aongorore data, aite mashandiro ebhizinesi anyatsoita basa, kuvandudza kugadzirwa, nekuenderera mberi nekuvandudza zvigadzirwa nemasevhisi. 5G inotarisirwa kubatsira mabhizinesi kunyatso kubata huwandu huri kukura hweruzivo rwunogadzirwa neInternet yezvinhu, nekuvandudza mameseji ari padyo anodiwa kumishinari akakosha masevhisi senge kuvhiyiwa kwerobhoti kana kutyaira kwakazvimiririra.
Circulator uye yakasarudzika ndeimwe yemidziyo yepamoyo ye5G base station. Iyo yese mbozhanhare yekutaurirana sisitimu inowanzo kuverengerwa nhare yekutaurirana zvivakwa, nhare yekutaurirana kufukidza system uye nhare yekutaurirana terminal zvigadzirwa. Base chiteshi ndeyemidziyo yekutanga yekutaurirana nhare. Base chiteshi system inowanzo kuverengerwa neRF kumberi-kumagumo, base chiteshi transceiver uye base chiteshi chiteshi. Iyo RF yekumberi-kumagumo inoitisa chiratidzo kusefa uye kuzviparadzanisa, iyo yepasi chiteshi transceiver inoitisa kugashira chiratidzo, kutumira, kuwedzera uye kudzikisa, uye base chiteshi chiteshi mutariri anoona nezve chiratidzo chiratidzo, kugadzirisa uye base chiteshi kudzora. Mune isina waya yekuwana netiweki, circulator inonyanya kushandiswa kuseta chiratidzo chekuburitsa uye chiratidzo chekupinza cheiyo base chiteshi antenna. Kune mamwe mafomu, iwo anotenderera anogona kuzadzisa anotevera mashandiro nemamwe majaira:
1. Inogona kushandiswa seye antenna commoner;
2. Mukubatana neBPF nekukasira kwekudzivirira, inoshandiswa mukushambadzira kwedunhu;
3. Iyo yekupedzisira resistor yakabatana nekunze kweye circulator seyoga, ndiko kuti, iyo chiratidzo ndiyo yekuisa uye kuburitsa kubva kune yakatarwa chiteshi;
4. Batanidza iyo yekunze ATT uye ishandise seyakafambisa ine inoratidzira simba rekuona basa.
Seimwe yezvinhu zvakakosha pazvinhu, zvidimbu zviviri zve Samarium Cobalt disc maginetiipa iyo yemagineti inodiwa kuti ifarire iyo ferrite-yakatakura junction. Nekuda kwehunhu hwakanakisa ngura kuramba uye kushanda kudzikama yakakwira kusvika ku 350 ℃ madhigirii, ese ari maviri maSmCo5 uye Sm2Co17 magineti anoshandiswa mumasekirita kana ari ega.
Nekushandisa kwe5G yakakura tekinoroji yeMIMO, kunwiwa kwevatenderi uye vanozviparadzanisa kwakawedzera zvakanyanya, uye nzvimbo yemusika inosvika kakati wandei e4G. Munguva ye5G, chinodiwa che network network chakanyanya kupfuura icho che4G. Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) ndeimwe yeakakosha matekinoroji ekuvandudza network kugona. Nekuda kwekutsigira tekinoroji iyi, huwandu hwe5G antenna chiteshi uchawedzera zvakanyanya, uye huwandu hweyechete chikamu chikamu kanyanga chiteshi ichawedzera kubva pamana chiteshi uye 8 chiteshi mu4G nguva kusvika makumi matanhatu nematanhatu. Kuwedzeredzwa kweiyo nhamba yematanho kunozotungamirawo mukuwedzera kwakanyanya mukuda kweanowirirana ma circulators uye ega. Panguva imwecheteyo, kune izvo zvinodiwa zvehuremu uye miniaturization, zvitsva zvinodiwa zvehuwandu uye huremu zvinoiswa kumberi. Uye zvakare, nekuda kwekuvandudzwa kweiyo inoshanda frequency band, iyo yekupinda chiratidzo irombo uye iko kuderera kwakakura, uye hwaro hwechiteshi huwandu hwe5G ichave yakakwira kupfuura iyo ye4G. Naizvozvo, munguva ye5G, kushandiswa kwevatenderi uye vanozviparadzanisa, uyezve magetsi eSamarium Cobalt achawedzera zvakanyanya.
Parizvino vanogadzira circulator / isolator munyika vanosanganisira Skyworks muUSA, SDP muCanada, TDK kuJapan, HTD kuChina, nezvimwe.